बच्चाहरूको मोट्रिन खुराक, फारमहरू, र शक्तिहरू | एकलकेयर - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट खेलहरु औषधि जानकारी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समुदाय, कम्पनी कम्पनी भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, समाचार घरपालुवा जनावर
मुख्य >> औषधि जानकारी >> बच्चाहरूको मोट्रिन खुराक, फारमहरू, र शक्तिहरू
फाराम र शक्तिहरू | बच्चाहरूको मोट्रिन खुराक चार्ट | बच्चाहरूको मोट्रिन खुराक प्रतिबन्धहरू | कसरी बच्चाहरूको मोट्रिन लिने | प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
बच्चाहरूको मोट्रिन (सक्रिय संघटक: आईबुप्रोफेन) एक ब्रान्ड नाम ओभर-द-काउन्टर औषधि हो जुन अस्थायी राहत प्रदान गर्दछ। ज्वरो वा सामान्य दुखाइ र पीडा टाउको दुख्ने, दाँत दुख्ने, दुख्ने दुखाइ, गला दुख्ने, सामान्य चिसो वा फ्लू, वा मोच र तनावका कारण बच्चाहरूको मोट्रिन २ र ११ बर्ष उमेरका बच्चाहरुका लागि उचित खुराकमा बनाइएको हुन्छ।
बच्चाहरूको मोट्रिन एक लक्षण राहत औषधि मात्र हो। कुनै अन्तर्निहित चिकित्सा अवस्थाको उपचार गर्नको लागि यो लक्षित गरिएको छैन जुन ती लक्षणहरूको कारण हुन सक्छ। बच्चाहरूको मोट्रिन स्वादको रूपमा चबाने ट्याब्लेट वा मौखिक निलम्बन (तरल) को रूपमा मुखले लिईन्छ। यो खाना बिना वा बिना लिन सकिन्छ।
सम्बन्धित: बच्चाहरूको मोट्रिन के हो? | बच्चाहरूको मोट्रिन कुपनहरू
बच्चाहरूको मोट्रिन फारमहरू र शक्तिहरू
बच्चाहरूको मोट्रिन एक चेवाबल ट्याब्लेट वा मौखिक निलम्बनको रूपमा उपलब्ध छ:
चबाने ट्याब्लेटहरू: १०० मिलीग्राम (मिलीग्राम) आईब्युप्रोफेन प्रति ट्याब्लेट अ gra्गुरको स्वाद र डाई-फ्री अpe्गुर स्वादमा उपलब्ध
मौखिक निलम्बन: १० मिलिग्राम प्रति mill मिलिलिटर (एमएल) बबल गम, अंगूर, बेरी, र रye्ग मुक्त बेरी स्वादमा उपलब्ध
बच्चाहरूको मोट्रिन ओरल सस्पेंशन १ 15 मिलि कपको साथ छ औषधिको सही खुराक नाप्नका लागि छ अंकका साथ।
बच्चाहरूको मोट्रिन खुराक चार्ट
बच्चाहरूको मोट्रिनले वयस्क-शक्ति मोट्रिन (२०० मिलीग्राम) को आधा खुराक (१०० मिलीग्राम) समावेश गर्दछ र २ र ११ वर्ष उमेरका बच्चाहरूको लागि उपयुक्त छ। २ भन्दा सानो बच्चाहरूलाई दिन सकिन्छ मोट्रिन शिशुहरूको ड्रप वा जेनेरिक शिशुहरूको आइबुप्रोफेन । इबुप्रोफेन शिशु ड्रपको उच्च एकाग्रता हुन्छ र औषधि सिरिंज वा ड्रॉपरको साथ धेरै सानो मात्रामा दिइन्छ।
हेरचाहकर्ताहरूले बच्चाहरूको मोट्रिनको सिफारिश गरिएको खुराक भन्दा बढि दिनु हुँदैन। एकल २ 24 घण्टा अवधिमा चार भन्दा बढि खुराक नदिनुहोस्।
खुराक वजन वा उमेर द्वारा निर्धारित गरिन्छ, तर तौल-आधारित खुराक प्राथमिकता दिइन्छ। उमेर द्वारा खुराक मात्र यदि बच्चाको वजन अज्ञात छ।
बच्चाहरूको मोट्रिन खुराक वजन र उमेर द्वारा
तौल उमेर सिफारिश गरिएको खुराक (ट्याब्लेट) सिफारिश गरिएको खुराक (तरल) अधिकतम खुराक
<24 lb <2 yrs स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस् स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस् स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस्
२-3--35 lb २-। वर्ष १ ट्याब्लेट (१०० मिलीग्राम) हरेक 8-8 घण्टा M मिलि (१०० मिलीग्राम) हरेक 8-8 घण्टा Tablets ट्याब्लेट वा २० मिलि (mg०० मिलिग्राम) २ 24 घण्टामा
-4 36--47 lb -5-। वर्ष १½ ट्याब्लेटहरू (१ mg० मिलीग्राम) हरेक 8-8 घण्टा .5. m मिली (१ mg० मिलीग्राम) हरेक 8-8 घण्टा Tablets ट्याब्लेट वा m० मिली (mg०० मिलिग्राम) २ 24 घण्टामा
-5 48--59 lb 8-8 वर्ष २ ट्याब्लेटहरू (२०० मिलीग्राम) हरेक 8-8 घण्टा १० मिली (२०० मिलीग्राम) हरेक 8-8 घण्टा Tablets ट्याब्लेट वा m० मिलि (mg०० मिलीग्राम) २ 24 घण्टामा
-०-71१ एलबी -10 -१० वर्ष २½ ट्याब्लेटहरू (२ mg० मिलीग्राम) हरेक 8-8 घण्टा १२..5 मिली (२ mg० मिलीग्राम) हरेक 8-8 घण्टा १० ट्याब्लेट वा m० मिलि (१००० मिलीग्राम) २ 24 घण्टामा
-२-9595 lb ११ बर्ष Tablets ट्याब्लेट (mg०० मिग्रि) हरेक 8-8 घण्टा १ m मिलि (mg०० मिलि) हरेक 6-- 6- घण्टा १२ ट्याब्लेट वा m० मिलि (१२०० मिलीग्राम) २ 24 घण्टामा
बच्चाहरूको मोट्रिन खुराक प्रतिबन्धहरू
बच्चाहरूको मोट्रिनले ज्वरो, चिसो, र सामान्य दुखाइ र पीडाबाट अस्थायी राहत प्रदान गर्दछ सामान्य सर्दी, फ्लू, टाउको, दाँत दुख्ने, कान दुख्ने, दुखेको घाँटी , र २ र ११ बीच उमेरका बच्चाहरूमा मोच र तनाव।
बच्चाहरूको मोट्रिनको उमेर सीमा हुँदैन; यो शिशु, किशोर, वा वयस्कहरूलाई दिन सकिन्छ। यद्यपि, उत्पादले दिशाहरू वा २ र ११ बीच उमेरका बच्चाहरू बाहेकका व्यक्तिहरूका लागि पूर्ण चेतावनी समावेश गर्दैन सिफारिस गर्दछ उमेर उपयुक्त निर्देशनहरूको साथ एक उपयुक्त शिशु वा वयस्क मोट्रिन उत्पादन साना बच्चाहरू वा वयस्कहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मृगौला र कलेजो समस्या
कलेजो वा मिर्गौला समस्या भएको बच्चालाई बच्चाको मोट्रिन दिनु भन्दा पहिले सँधै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस्। खुराक परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्दछ वा यो दिन सुरक्षित नहुन सक्छ।
बिरामी बिरामीहरू :
Creat०-60० मिलि / मिनेटको क्रिएटिनिन निकासी: सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस्
बिरामी बिरामीहरु : प्रयोग नगर
बच्चाको मोट्रिन नदिनुहोस् स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको निर्देशन बाहेक यदि बच्चा छ भने:
डिहाइड्रेशन (पखाला, बान्ता, वा पर्याप्त तरल पदार्थ नपिउँदा)
आईबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, वा एस्पिरिनको एलर्जी प्रतिक्रिया
जबसम्म बच्चाको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्देशन दिएका छैनन्, बच्चाको मोट्रिन नदिनुहोस् यदि बच्चा रगत पातलो औषधी, डियुरिटिक्स, वा अन्य NSAID ले जस्तै एस्पिरिन वा नेप्रोक्सेन लिइरहेको छ भने।
बच्चाहरूलाई मोट्रिन कसरी दिने
बच्चाहरूको मोट्रिन एक चबाने ट्याब्लेट वा मौखिक निलम्बन (तरल) को रूपमा दिन सकिन्छ। मौखिक निलम्बन एक औषधि कपको साथ आउँदछ। कपमा मार्कहरूले सिफारिस गरिएको प्रत्येक डोज प्रत्येकलाई संकेत गर्दछ: २. m मिलीलीटर, m मिलि, .5. m मिली, १० मिली, १२..5 मिली र १ m मिलि। बच्चाको बच्चाको मोट्रिन दिंदा, निम्न सुरक्षा र प्रभावकारिता सल्लाहहरू विचार गर्नुहोस्:
दिशाहरू र चेतावनीहरू पढ्नुहोस् एक बच्चालाई बच्चाको मोट्रिन दिनु अघि।
औषधि सहित चार्टमा सही खुराक फेला पार्नुहोस्।
सही खुराक निर्धारण गर्न बच्चाको वजन प्रयोग गर्नुहोस्। बच्चाको उमेर प्रयोग गर्नुहोस् यदि वजन अज्ञात छ।
फार्मासिष्ट वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस् यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कि बच्चालाई कति दिने औषधी।
बच्चालाई दिइने सबै अन्य औषधीहरू जाँच गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरूले आईबुप्रोफेन, एस्पिरिन, वा नेप्रोक्सेन समावेश गर्दैन।
बच्चाहरूको मोट्रिन ओरल सस्पेंशनको प्रशासन गर्दा, बोतललाई खन्याउनु अघि बोतललाई राम्रोसँग हान्नुहोस्। औषधीको सक्रिय भाग समयको साथमा तल बसाउन सक्दछ।
सही खुराक निर्धारण गर्न उमेर भन्दा बच्चाको वजन प्रयोग गर्नुहोस्। यदि बच्चाको वजन अज्ञात छ भने, बच्चाको मोट्रिन वितरण गर्नु अघि बच्चालाई तौल गर्नुहोस्।
खुराकको सही मापन गर्न सधै नाप्ने कप वा मापन गर्ने सिरिrin प्रयोग गर्नुहोस्। कुनै अन्य प्रकारको उपकरण प्रयोग नगर्नुहोस्, जस्तै किचनको चम्चा। यदि औषधि कप हराएको छ भने, एक फार्मेसीले एक डोजि cup कप वा औषधि सिरिंज प्रदान गर्न सक्छ।
चबाने ट्याब्लेटहरू निलउँदा उनीहरूको ईर्ष्याको भावना हुन सक्छ, त्यसैले बच्चालाई ट्याब्लेट लिइसकेपछि १ 15 minutes० मिनेटको लागि बसेर औषधी अझ सजीलो पार गर्न दिनुहोस्।
यो औषधिलाई दूध वा खानाको साथ दिनुहोस् यदि यसले पेट दुख्छ भने।
प्रत्येक डोज दिइएको समय रेकर्ड गर्नुहोस् कि अर्को खुराक एकदम चाँडो दिइएको छैन।
एक ट्याब्लेटलाई आधा भागमा विभाजन गर्न ट्याब्लेटको व्यासभरि स्कोरिंग मार्क प्रयोग गर्नुहोस्।
ट्याब्लेट निल्नु भन्दा पहिले कुचोनु पर्छ वा पूर्ण रूपमा चर्नु पर्छ।
बच्चाले औषधी पूर्ण रूपमा निल्नको लागि एक सानो गिलास पानी पिउनु पर्छ।
प्रत्येक चार देखि छ घण्टामा दोहोर्याउनुहोस् यदि लक्षणहरू जारी रह्यो भने।
एकल २ 24 घण्टा अवधिमा चार भन्दा बढि खुराक नदिनुहोस्।
ट्याब्लेटलाई बच्चाको पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस्।
तरल डालो सही डोज मार्कमा।
बच्चाले नाप्ने कपमा सबै तरल पदार्थ पिउनु पर्छ।
बच्चा प्रतिरोधी टोपी बदल्नुहोस् र कस गर्नुहोस् र बोतललाई बच्चाको पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस्
प्रत्येक छ देखि आठ घण्टामा दोहोर्याउनुहोस् यदि लक्षणहरू रहिरह्यो भने।
बच्चाहरूको मोट्रिन खुराक FAQ हरू
यसले बच्चाहरूको मोट्रिनलाई काम गर्न कति समय लाग्छ?
एक चबाने ट्याब्लेट वा तरलको रूपमा लिईन्छ, आईबुप्रोफेन (सक्रिय संघटक) बरु चाँडै शरीरले अवशोषित गर्दछ। बाल मोट्रिन को प्रभाव मा लात सुरु गर्नु पर्छ करीव १ to देखि minutes० मिनेट औषधि निगल भए पछि इबुप्रोफेन एक देखि दुई घण्टामा शिखर प्रभावकारितामा पुग्छ, तर यो ढिलाइ हुन सक्छ to० देखि minutes० मिनेट सम्म यदि बच्चाहरूको मोट्रिन खानाको साथ लिइएको छ। शरीरमा चरम स्तर %०% देखि %०% कम हुन्छ जब आईबुप्रोफेनलाई खानाको साथ लिइन्छ, तर यसलाई खानाको साथ सेवन गर्दा पेट अप्ठ्यारो हुनबाट बच्न आवश्यक पर्दछ।
बच्चाको मोट्रिन कहिलेसम्म बच्चाको प्रणालीमा रहन्छ?
सिफारिश गरिएको खुराकमा, बाल मोट्रिनको प्रभाव एक बच्चामा लगभग चार देखि छ घण्टा सम्म हुन्छ तर आठ घण्टा सम्म रहन सक्छ। सुरक्षा कारणका लागि, बच्चाहरूको मोट्रिन खुराकहरू प्रत्येक छ देखि आठ घण्टा दिइन्छ, जबकि प्रायः वयस्कहरू प्रत्येक चार देखि आठ घण्टामा आइबुप्रोफेन लिन सक्छन्।
डाक्टरहरू, फार्मासिस्टहरू, र अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले बच्चा मोट्रिन जस्ता औषधीहरू आधा जीवनमा प्रणालीमा कति लामो समयसम्म रहन्छन् भनेर नाप्दछन्। यो शरीरबाट आधा ड्रग हटाउनको लागि शरीरलाई कति लामो लिन्छ भन्ने उपाय हो। इबुप्रोफेनको आधा जीवन करिब दुई घण्टाको हुन्छ, तर सिफारिश गरिएको खुराक प्रयोग गरेर औषधि सुरक्षित रूपमा दिन धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
के हुन्छ यदि मैले बच्चाको मोट्रिनको एक डोज याद गरे?
मनमा राख्नुहोस् कि बच्चाहरूको मोट्रिन एक लक्षण-राहत औषधि हो। यसले कुनै पनि अन्तर्निहित चिकित्सा अवस्थाको उपचार गर्दैन। यदि एक खुराक हरायो भने सबैभन्दा खराब हुन सक्छ कि दुखाइ र ज्वरो फिर्ता जस्ता लक्षणहरू। त्यहाँ डस हराएको वा ढिलाइ भएको खण्डमा त्यहाँ पर्खनु पर्दैन। मात्र याद गरीएको डोज दिनुहोस्। निश्चित गर्नुहोस्, तथापि, कम्तिमा छ घण्टा बितिसके पछि अर्को खुराक दिइएन।
म कसरी बच्चाहरूको मोट्रिन लिन रोक्न सक्छु?
कुनै पनि NSAID जस्तै, बच्चाहरूको मोट्रिन उत्तम प्रयोग गरिन्छ सबैभन्दा कम खुराक सम्भव छ र लक्षणहरू रहिरहने बित्तिकै NSAIDs, बच्चाहरूको मोट्रिन जस्तै, ठूलो मात्रामा वा लामो समयको लागि प्रयोग गरिनु हुँदैन। यदि लक्षणहरू झन् झन् खराब हुँदै गइरहेको छ वा सुधार हुँदैछ भने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्। बच्चाले पहिलो २ 24 घण्टामा केही लक्षण राहत महसुस गर्नु पर्छ। यदि निर्देशनको रूपमा प्रयोग गरियो भने, बालबालिकाको मोट्रिन सुरक्षित रूपमा साइड इफेक्ट वा फिर्ती लक्षणहरू बिना रोक्न सकिन्छ।
यदि बच्चालाई बच्चाको मोट्रिन प्रति महिना १ days दिन वा अधिक दिन दिइन्छ भने, चिकित्सा सहायता लिनुहोस्। अधिक उपयुक्त औषधि निर्धारित गर्न सकिन्छ, र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले बच्चाको मोट्रिन रोक्नको लागि सल्लाह दिन सक्छन्।
विरलै अवस्थाहरूमा, बच्चाहरूको मोट्रिनले एलर्जी प्रतिक्रियाहरू निम्त्याउन सक्छ जसमा पुराना, सूजन, वा सास फेर्न समस्याहरू हुन सक्छ। यदि यस्तो हुन्छ भने, औषधि दिन रोक्नुहोस् र तुरून्त स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
बच्चाहरूको मोट्रिनको सट्टा के प्रयोग गर्न सकिन्छ?
Ibuprofen, बाल मोट्रिनमा सक्रिय औषधी सामान्यतया सुरक्षित छ। समान औषधिहरू, जस्तै एस्पिरिन र नेप्रोक्सेन, ओभर-द-काउन्टर औषधीको रूपमा पनि उपलब्ध छन्। यी औषधीहरूको सम्भावित साइड इफेक्टहरू समान छन्, त्यसैले यदि बच्चाले बालबालिकाको मोट्रिनको साथ समस्या अनुभव गरिरहेको छ भने, सुरक्षित विकल्प एसिटामिनोफेन हुन सक्छ। बच्चाहरूको Tylenol3देखि 11 वर्षको उमेरका बच्चाहरूको लागि एसिटामिनोफेन उत्पादन हो।
बच्चाहरूको मोट्रिन को लागी अधिकतम खुराक के हो?
बच्चाहरूको लागि अधिकतम आईबुप्रोफेन खुराक बच्चाको वजनमा आधारित हुन्छ। हेरचाहकर्ताहरूले अधिकतम दैनिक खुराक भन्दा बढि, सिफारिस गरिएको व्यक्तिगत खुराक भन्दा बढि दिन, वा छ घण्टा भन्दा कमको मात्रामा खान नदिन सावधानी राख्नु पर्छ। बच्चाको वजन र उमेरमा आधारित विशिष्ट जानकारीको लागि माथिको खुराक चार्ट हेर्नुहोस्।
बच्चाहरूको मोट्रिनसँग के कुराकानी गर्छ?
इबुप्रोफेन बढी चाँडो शरीरमा समाहित हुन्छ र शिखर प्रभावकारितामा छिटो पुग्छ जब खाना बिना लिइन्छ। जे होस्, खाली पेटमा लिदा, आईबुप्रोफेनले पेट दुखाइ वा पीडा हुने बढी सम्भावना हुन्छ। धेरै हेरचाहकर्ताहरू, त्यसपछि, पेटको समस्याहरू रोक्नको लागि बच्चाहरूको मोट्रिनलाई खानाको साथ दिने छनौट गर्छन्।
केहि औषधिहरू सामान्यतया बच्चाहरूलाई सिफारिस गरिन्छ कि एक दर्द निवारकको रूपमा आईबुप्रोफेनको प्रभावकारिता कम गर्दछ। अर्कोतर्फ, क्याफिन, सोडास र ऊर्जा पेयहरूमा एक सामान्य घटक, हुन सक्छ दुखाइ-राहत गुणहरू वृद्धि गर्नुहोस् आईबुप्रोफेनको, विशेष गरी टाउको दुखाइमा। क्याफिन भएको पेय पदार्थहरूलाई होशियारसाथ दिनुपर्दछ, यदि सबैमा छ भने, बच्चाहरूलाई।
सबै औषधिहरू जस्ता, बच्चाको मोट्रिनले केही औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ। बच्चालाई एक भन्दा बढि काउन्टर वा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग दिँदा हेरचाहकर्ताहरूले चिकित्सकीय सल्लाह लिनुपर्दछ।
बच्चाको मोट्रिनलाई अन्य ड्रगहरू नदिनुहोस् जसमा आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, नेप्रोक्सेन, वा अन्य एनएसएआईडीहरू छन्। यसले पेटमा रक्तस्राव र अल्सरको जोखिम पैदा गर्दछ र रगतको थक्लीहरू गठन गर्ने शरीरको क्षमतामा हस्तक्षेप गर्दछ। यदि NSAID खुराक अधिक छ भने रक्तस्राव र चोटपटक गम्भीर समस्या हुन सक्छ।
उही कारणको लागि, बच्चाको मोट्रिनबाट बच्नु पर्छ यदि बच्चाले रगत पातलो पार्ने औषधी सेवन गरिरहेको छ, रक्तस्राव सम्बन्धी समस्या भएको छ वा डिप्रेसन वा चिन्ताको उपचारको लागि चयनित सेरोटोनिन रिअपटेक इन्हिबिटर (एसएसआरआई) लिइरहेको छ। रक्तस्राव हुने औषधि बाहेक, धेरै डाईटरी वा हर्बल सप्लिमेन्टमा एन्टीकोआगुलेन्ट गुणहरू पनि हुन्छन् र बच्चाहरूको मोट्रिनको साथ एक साथ प्रयोग हुनुहुन्न।
अन्तमा, निर्माता चेतावनी दिन्छ कि बच्चाहरूको मोट्रिन कोर्टीकोस्टेरोइडहरूसँग जोड्नु हुँदैन, जस्तै हाइड्रोकोर्टिसोन वा फ्लुटिकासोन । संयोजन को जोखिम को वृद्धि हुनेछ आइबुप्रोफेनको जठरांत्र संबंधी साइड इफेक्टहरू ।
बच्चाहरूको मोट्रिन , Epocrates
बच्चाहरूको मोट्रिन चबाने आइबुप्रोफेन ट्याब्लेटहरू , Johnson & Johnson
मोट्रिन (आईबुप्रोफेन) निलम्बन १०० मिलीग्राम / m मिलि औषधि गाइड , एफडीए
आइबुप्रोफेनको क्लिनिकल फार्माकोलोजीको एक सिंहावलोकन , ओमान मेडिकल जर्नल
ओभर-द-काउन्टर NSAIDs को साथ प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया र औषधि औषधि अन्तर्क्रिया , चिकित्सकीय र क्लिनिकल जोखिम व्यवस्थापन
घरमा काम गर्दा पीठोको तल्लो पीडासँग लड्न तपाईंको गाइड
जब तपाइँ फ्लू हुनुहुन्छ संक्रामक हुनुहुन्न
यौन प्रदर्शन चिन्ता संग कसरी व्यवहार गर्ने
तपाइँ बीमा बिना डाक्टर कहाँ जान सक्नुहुन्छ
कति 50mg tramadol एक percocet बराबर